Progressive Voice Myanmar » Myanmar Mechanism Carries On Its Work Despite the Pandemic
Home Resources Press Releases Myanmar Mechanism Carries On Its Work Despite the Pandemic
August 20th, 2020 • Author: United Nations Independent Investigative Mechanism for Myanmar •4minute read
The United Nations Independent Investigative Mechanism for Myanmar steadily pursued its mission over the last months despite dealing with the extraordinary circumstances resulting from the global COVID-19 pandemic. In its second annual report, the Mechanism highlighted the progress made since last September in the implementation of its mandate to collect, preserve and analyse evidence of the most serious international crimes committed in Myanmar since 2011, and to prepare files in order to facilitate and expedite fair and independent criminal proceedings in national, regional or international courts or tribunals. The Head of the Mechanism will formally present the report to the 45th regular session of the Human Rights Council (HRC) in September. The report will also be transmitted to the General Assembly ahead of its 75th session, which begins in September 2020.
The report notes the challenges presented by the COVID-19 pandemic. The pandemic has caused delay in the Mechanism’s planned onboarding of staff and some operational plans for 2020. It has restricted the Mechanism’s ability to travel to engage with relevant stakeholders and collect evidence, and created uncertainty regarding future mission plans. However, the Mechanism has made use of videoconferencing, which has permitted the Mechanism to remain engaged with many relevant interlocutors.
In order to continue advancing its work, the Mechanism has focused its efforts on identifying potential information sources that can be contacted securely via electronic means, collecting and consolidating the information and evidence available fromavariety of sources, and analysing how the information could be used to show individual criminal responsibility. However, the Mechanism’s ability to work on the ground remains restricted by the need to ensure the safety, security and health of its interlocutors – those who witnessed events or have relevant information about serious international crimes. Further, some interlocutors have limited internet or telephone access, and the need to ensure the safety, security and privacy of the interlocutors and their information often makes remote communication impractical. The Mechanism has also concentrated efforts on obtaining documentation and evidence through open source investigations, and planning and preparing for future investigative missions.
Since its previous report to the HRC, the Mechanism has issued formal requests for information toavariety of entities and individuals and has received information and materials from several witnesses and other information providers. The Mechanism has consolidated this information along with materials collected by the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar (FFM). In turn, the Mechanism provided some of these materials toaprosecutorial authority upon its request. This was done in line with the Mechanism’s mandate and with the consent of the entities and individuals that had originally provided the information.
The Mechanism has also been engaging with the Parties in the case concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Gambia v. Myanmar) at the International Court of Justice, in response to requests for information in relation to that case. In accordance with the Mechanism’s mandate and its Terms of Reference, the Mechanism has commenced the process of sharing materials relevant to these proceedings but again, only when it has the necessary consent from the information provider. Further, the Mechanism has informed the Parties that it will not share any information if it believes that doing so could endanger the information provider or anyone identified nor if the Mechanism believes that sharing the information with the Parties could compromise future criminal investigations.
In parallel to the implementation of its substantive mandate, the Mechanism continues to procure the necessary technical equipment, software and specialized capabilities to preserve and share evidentiary materials with courts and tribunals. It has developed an internal training programme to deepen the expertise of its personnel in highly specialized and rapidly evolving technical areas, including through online training sessions in light of remote working arrangements currently in place.
As it continues to carry out its investigative activities and monitor the ongoing situation in Myanmar, the main objective of the Mechanism in the next year will be to expand and deepen its substantive work on all fronts in order to enable perpetrators of serious international crimes in Myanmar to be brought to justice and to deter future crimes. However, the Mechanism cannot do this alone. It will require the continued support and assistance of all parts of the international community, in order to fully achieve the purpose for which it was established.
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ဖြစ်နေသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ယန္တရားသည် ၎င်း၏အလုပ်ကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိ
ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုယန္တရားသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းဖြစ်ပွားနေသည့် COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြောင့် ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိသော၊ ထူးခြားသည့် အခြေအနေများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေရသော်လည်း၊ ပြီးခဲ့သည့်လများအတွင်း ၎င်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ယန္တရား၏ ဒုတိယ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာတွင် (၂၀၁၁) ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျူးလွန်ခဲ့သော အကြီးလေးဆုံးသော နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုများ၏ သက်သေခံအထောက်အထားများကို စုဆောင်းရန်၊ ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ စိစစ်သုံးသပ်ရန်နှင့် နိုင်ငံတွင်း၊ ဒေသတွင်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးများ သို့မဟုတ် ခုံရုံးများတွင် မျှတပြီး လွတ်လပ်သော ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တရားစွဲဆိုမှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စွာ၊ လျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်၊ အမှုတွဲများကို ပြင်ဆင်ပေးရန် စသည့် ယန္တရား၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို လွန်ခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလမှစ၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်၊ ရရှိခဲ့သော တိုးတက်မှုများကို အလေးပေးဖော်ပြထားသည်။ စက်တင်ဘာလတွင် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏ (၄၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင်လည်း ယန္တရား၏ အကြီးအကဲက အစီရင်ခံစာကို တရားဝင် တင်သွင်းမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အစီရင်ခံစာကို အထွေထွေညီလာခံသို့လည်း စက်တင်ဘာလ (၂၀၂၀) ခုနှစ်တွင် စတင်မည့် ၎င်း၏ (၇၅) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမတိုင်မီ ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်သည်။
COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြောင့် ထွက်ပေါ်လာသော အခက်အခဲများကို အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ကပ်ရောဂါကြောင့် ယန္တရားက စီစဉ်ထားသည့် ဝန်ထမ်း ရာထူးခန့်အပ်ရေးကိစ္စနှင့် (၂၀၂၀) ခုနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တချို့ကို နှောင့်နှေးမှုများ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ကပ်ရောဂါကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများထံ သွားရောက်ဆက်သွယ်ပြီး သက်သေခံအထောက်အထားများကို စုဆောင်းမည့် ယန္တရား၏ ခရီးသွားလာနိုင်စွမ်းကို အကန့်အသတ်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ယန္တရား၏ အနာဂတ် အစီအစဉ်များကို မသေချာ မရေရာ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ယန္တရားသည် ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ခြင်းနည်း အသုံးပြု၍ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်၊ သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ တာ၀န်ခံ အမြောက်အမြားနှင့် ဆက်လက် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။
သတင်းရင်းမြစ်မျိုးစုံမှ ရရှိနိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် သက်သေခံအထောက်အထားများကို စုဆောင်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်းအပြင်၊ ရာဇ၀တ်မှုတွင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ တာ၀န်ရှိမှုကို ပြသနိုင်ရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက်အသုံးပြုပုံကို စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း စသည့် ယန္တရား၏ အလုပ်ကို မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်၊ ယန္တရားသည် အလားအလာရှိသော သတင်းရင်းမြစ်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ထိုရင်းမြစ်များနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်နည်းလမ်းများဖြင့် လုံခြုံစွာ ဆက်သွယ်နိုင်မည့် ကိစ္စများကို အလေးထား အားစိုက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အခင်းဖြစ်ပွားမှုကို မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူများ သို့မဟုတ် ကြီးလေးသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက် ရရှိထားကြသူများ၏ ဘေးကင်းမှု၊ လုံခြုံမှုနှင့် ကျန်းမာရေး စသည့် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စများကို၊ ကွင်းဆင်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ယန္တရားတွင် ကန့်သတ်ချက်များ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းတချို့သည် အင်တာနက် သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းကို အကန့်အသတ်ဖြင့် သုံးနိုင်သည်။ သူတို့နှင့် သူတို့၏ သတင်းအချက်အလက်များ ဘေကင်းမှု၊ လုံခြုံမှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ လျှို့၀ှက်ထားရမည့် ကိစ္စများကို သေချာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အဝေးမှ လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် လက်တွေ့မကျမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ယန္တရားသည် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် သက်သေခံ အထောက်အထားများကို လူတိုင်း ရရှိနိုင်သည့် အင်တာနက်ရင်းမြစ်များ (open source investigations) မှတစ်ဆင့် စုံစမ်းရယူခြင်းအပြင်၊ အနာဂတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အစီအစဥ်ချမတ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းကိုလည်း အာရုံစိုက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီသို့ ယခင် အစီရင်ခံစာ တင်ခဲ့စဥ် ကတည်းကစ၍၊ ယန္တရားသည် အဖွဲ့အစည်း၊ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂိုလ် ပေါင်းစုံထံမှ သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူရန် တရားဝင် တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မျက်မြင်သက်သေနှင့် အခြားသော သတင်းအချက်အလက် ပေးသူအချို့ထံမှ သတင်းအချက်အလက်နှင့် သက်သေခံပစ္စည်းများကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ယန္တရားသည် ယင်းသတင်းအချက်အလက်များကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတကာ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်မှ စုဆောင်းခဲ့သော သက်သေခံပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ တစ်ဖန် ယန္တရားသည် တရားစွဲဆိုသည့် အာဏာပိုင်တို့ထံ ၎င်းတို့၏ တောင်းဆိုချက်အရ ယင်း သက်သေခံပစ္စည်းများအချို့ကို ပေးပို့ခဲ့သည်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ယန္တရား၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အညီ အဆိုပါ သတင်းအချက်အလက်များကို မူလ ပေးပို့သူ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယန္တရားသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး၌ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်သည့် ရာဇဝတ်မှု တားဆီးရေးနှင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရေးဆိုင်ရာစာချုပ် အရ ကျင့်သုံးမှု လျှောက်လွှာ (ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ )အမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များ တောင်းခံမှုအပေါ် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်၊ ထိုအမှုတွင် ပါ၀င်ပတ်သက်နေသူများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ယန္တရားသည် ထို တရားစွဲဆိုမှုများနှင့် သက်ဆိုင်သော သက်သေခံပစ္စည်းများကို ‌ဝေမျှပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ယန္တရား၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ လုပ်ငန်းတာဝန် သတ်မှတ်ချက်တို့နှင့်အညီ စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ထပ်ပြီး ဆိုရသော်၊ သတင်းအချက်အလက် ပေးပို့သူ၏ ခွင့်ပြုချက် ရရှိမှသာ ‌ဝေမျှခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ယန္တရားက အချက်အလက်များကို ‌ဝေမျှခြင်းအားဖြင့် အချက်အလက်များ ပေးပို့သူအား ဒုက္ခကျရောက်စေနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ပါက သို့မဟုတ် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ပေါ်သွားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါက သို့မဟုတ် အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ‌ဝေမျှခြင်းအားဖြင့် အနာဂတ် ရာဇ၀တ်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် ထိခိုက်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါက၊ မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆို ‌ဝေမျှမည် မဟုတ်ကြောင်း သက်ဆိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အကြောင်းကြားထားသည်။
ယန္တရားသည် ၎င်း၏ အဓိကကျသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ သက်သေခံပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ၎င်းတို့ကို တရားရုံးများနှင့် ခုံရုံးများသို့ ‌ဝေမျှရန်အတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် အထူးပြုစွမ်းရည်များကို ဆက်လက် စုဆောင်းနေပါသည်။ လက်ရှိတွင် အဝေးမှနေ၍ အလုပ်လုပ်ရသည့် အစီအစဉ်များရှိနေသည့်အလျောက်၊ ယန္တရားသည် အထူးကျွမ်းကျင်မှုရှိရန်လိုအပ်၍ လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲတိုးတက်နေသော နည်းပညာနယ်ပယ်များတွင် ယန္တရားဝန်ထမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှု ပိုမိုမြင့်မားလာစေရန်၊ ၎င်းတို့အတွက် အွန်လိုင်းသင်တန်း အစီအစဉ်များ အပါအဝင် အဖွဲ့တွင်း သင်တန်းအစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို ယန္တရားက စီမံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိဖြစ်နေဆဲ အခြေအနေများကို ဆက်လက် စောင့်ကြည့်သည့် အလုပ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေစဉ်၊ လာမည့်နှစ်တွင် ယန္တရား၏ အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကြီးလေးသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုများ ကျူးလွန်သူများအား တရားစီရင်နိုင်ပြီး၊ တရားမျှတမှုရရှိရန်နှင့် အနာဂတ်ပြစ်မှုများကို တားဆီးနိုင်ရန်အလို့ငှာ၊ ယန္တရား၏ အလုပ်ကဏ္ဍတိုင်းတွင် ပို၍ အဓိကကျသည့် အလုပ်ကို တိုးချဲ့ပြီး နက်ရှိုင်းစွာ လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤကိစ္စများကို ယန္တရား တစ်ဖွဲ့တည်း လုပ်၍ မရနိုင်ပါ။ ယန္တရားကို တည်ထောင်ခဲ့သည့် ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း အပြည့်အဝ အောင်မြင်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း တစ်ရပ်လုံး၏ အစဥ်တစိုက် ပံ့ပိုးမှုနှင့် အကူအညီများ လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။
ဤ အစီရင်ခံစာ၏ မြန်မာဘာသာပြန် အပြည့်အစုံကို မကြာမှီတင်ပေးသွားမည်။ မြန်မာဘာသာပြန်သည် ကုလသမဂ္ဂက တရား၀င် ဘာသာပြန်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။